Abacre Atọ ndị yiri nkata Management na Control - isi Page
Abacre Atọ ndị yiri nkata Management na Control
Iru akara na nke a ọzọ ọgbọ atọ ndị yiri nkata management na ịchịkwa!
Top 10 ihe ịzụta Abacre Atọ ndị yiri nkata Management na Control
Abacre Atọ ndị yiri nkata Management na Control bụ ọgbọ ọhụrụ nke atọ ndị yiri nkata software maka Windows. Ọ na-ekpuchi niile arụmọrụ site na iwu, ịgba ụgwọ, azụ, na atọ ndị yiri nkata ka ọrụ Ponseti. Ojii interface na-ọma kachasị n'ihi na elu ọsọ ọsọ ọsọ nke a ahịa si ka na mgbochi nke nkịtị ndudue. Ọ mere maka iji na otutu kọmputa, na e nwere pụrụ ịdabere na ala ikike na ọkwa.
Ọ na-akwado kasị atọ ndị yiri nkata ngụkọta oge ụzọ: LIFO, FIFO na Nkezi. Ahịa ihe nwere ike ịgụnye dị iche iche yiri nkata ihe dị ka components.
N'ihi na ndị njikwa, e nwere bụ ọgaranya set nke kọrọ na-egosi na a zuru foto nke atọ ndị yiri nkata na ahịa arụmọrụ: na aka atọ ndị yiri nkata, uru n'akụkụ peeji, ire site nyere oge, awa nke elu ibu, z-si, ihe kasị ike ọrụ, ịkwụ ụgwọ ụzọ, na akpaka ụtụ isi calculations.
Site standardizing dum atọ ndị yiri nkata management na-achịkwa usoro, software na-eme ka mma iji gị ọrụ 'oge na ume n'ịgbanwe mee gị ntụgharị na uru n'akụkụ peeji.